Mpanamboatra sy mpamatsy PP - China PP Factory
Tavoahangy plastika plastika 9 oz voajanahary vita amin'ny vozony 28-410
Ny tavoahangin-tsika 9oz / 266ml dia vita miaraka amina fitaovana PP ho an'ny hatevin'ny rindrina tsara kokoa. Boribory ny vatan'ny tavoahangy, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy vokatra azo aseho amin'ny talantalana. Ny rindrina malefaka amin'ny tavoahangy dia afaka manonta ny sary famantarana ny orinasanao. / 410 dia azo ampiarahina amin'ny paompy famaohana, paompy famaohana, paompy mibaribary, mora kokoa entina sy ampiasaina. Azo ampiasaina amin'ny fanadiovana an-dakozia, fanadiovana rano amin'ny zavamaniry, ranon-disinfection, fonosana rano am-bava, sns.